Shir lagu horumarinayo mashaariicyo oo ka furmay Garoowe (Sawirro) – Bandhiga
Shir lagu horumarinayo mashaariicyo oo ka furmay Garoowe (Sawirro)
Wasiirka wasaaradda Qorsheynta xukuumadda Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange ayaa maanta oo isniin ah magaalada Garoowe ku daah-furay shir ay ka qeyb galayaan ku dhowaad 10 wasaaradood oo maamulka ka tirsan.
Shirka oo la shaaciyay in ay ka qeyb galayaan 8 wasaaradadood oo xukuumadda Puntland ka tirsan ayaa sidoo kale waxaa xaadir ku ah qaar kamid ah wakiillada Midowga Yurub.
Ujeedka shirka ayaa lagu sifeeyay jaan-goynta mashaariicda horumaineed ee gobollada Puntland shanta sano ee soo socda kuwaasoo billaaban doona sanadka foodda inagu soo haya 2020-ka.
Wasiirka qorsheynta Puntland Cabdiqafaar Xaange, oo shir-guddoominaya shirkani ayaa hoosta ka xariiqay in mashaariicyadani ay bulshada ku nool degaannada kale duwan ee dowlad goboleedku u leeyihiin ahmiyad ballaaran.
Shirkaan ayaa inta uu socdo waxaa la tashiyo la yeelanayaa khuburro caalamiya iyo kuwo dowladda u shaqeeyo, kuwaas oo talooyinka ka dhiibanayo arrimaha mashaariicda horumarineed u baahan kuwaasoo kala ah;
Wasiirka iyo hay’adaha Yurub oo mashaariicdani fulintooda ballanqaaday ayaa horay Garoowe ugu soo bandhigay horudhaca arrimahaasi iyo sida loogu istaagi karo wax ka qabashadooda.